जीवन कसरी जिउने ? पुरा पढ्नु होस ? « गोर्खाली खबर डटकम
हामी सधै जीवन जिउने कुरा गर्छौं । जिउने कला सिक्छौं । यसरी जिउने, त्यसरी जिउने भन्दा भन्दै सबै समय गुज्रिएर जान्छ ।
जीवन कसरी जिउने ? यसको कुनै फर्मूला छैन । किनभने फरक बर्ग, बर्ण, भूगोल, संस्कृति, हावापानीले पनि मानिसको जिउने शैलीमा प्रभाव पार्छ । एउटा भूगोलमा जन्मिएका मानिसले जुन ढंगले जिउने अभ्यास गर्छ, अर्को गोलार्द्धका व्यक्तिले त्यसको हुबहु अनुशरण गर्न सक्दैन । त्यसैले जीवन यसरी जिउनुपर्छ भनेर सर्वमान्य फम्र्याट तयार गर्न सकिदैन ।
तर, जीवन जिउनु एक कला हो । जन्मिएपछि हामी बाँच्छौं । तर, कस्तो जीवन बाँच्छौं भन्ने कुरा हाम्रो कलाको कुरा हो । कसैले गुणस्तरिय जीवन बाँच्छन्, कसैले बेकारको जीवन बाँच्छ । एउटा भनाई छ, ‘जीवन कति लामो बाँच्छौं, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । तर, कस्तो जीवन बाँच्छौं, त्यसले खास अर्थ राख्छ ।’
कसरी बाँच्ने ?
जन्म नै मृत्युको सुरुवात मानिन्छ । अर्थात जन्मिएपछि मृत्यु निश्चित छ । हामी जन्मदेखि मृत्युसम्म एउटा निश्चित अवधी बाँच्छौं । यही अवधीमा हामीले आफ्नो बाँच्ने कला सिक्न सक्छौं । सिकाउन सक्छौं ।
निश्चित अवधीका लागि जीवन लिएर आएका हामी खुसीसाथ, प्रेमपूर्वक, उमंगमय ढंगले । तर, हामीसँग यस्तो कला हुँदैन, जसले गर्दा क्रोध, लोभ, इष्र्या, प्रतिशोध, सत्रुता साँधेर कष्टकर जीवन बाँच्न पुग्छौं । त्यसैले त जीवनको मूल्य र मान्यतालाई बुझ्न जरुरी छ । जीवन के हो ? कसरी जिउने भन्ने कुरा हामी आफैबाट सिक्न सक्छौं, अरुबाट प्रेरणा लिन सक्छौं । जीवनलाई जति कलात्मक, रचनात्मक र मूल्यवान् बनाउन सक्छौं, उत्तिकै शानदार दिनहरु विताउन सक्छौं ।
आखिर समय त वितेर जान्छ नै । आज जुन क्षण हामीसँग छ, त्यो हिजो हुनेछ । यसरी हरेक क्षण हामीसँग रहने छैन । जतिबेला त्यो क्षण हामीसँग हुन्छ, किन रिस, द्वेष, लोभ, क्रोधमा फसेर विताउने ? पूर्खाको मार्गदर्शन
जीवन के हो ? जीवनलाई कसरी रचनात्मक बनाउने ? यस सम्बन्धमा हाम्रा पूर्खाहरुले आफ्नो जीवन-भोगाई सुनाउँदै आएका छन् ।
विभिन्न पौराणिक ग्रन्थ, ऋषिमुनीहरुले हामीलाई गुणस्तरिय जीवन विताउन उचित मार्गदर्शन गर्दै आएका छन् । यद्यपी यस्ता कुरालाई हामीले मनन गर्न सकेका छैनौ । त्यसैले त आज हामी ‘कसरी खुसी हुने ?’, ‘कसरी सुखी हुने ?’, ‘कठिन क्षणमा कसरी आफुलाई सम्हाल्ने ?’, ‘दाम्पत्य सुख कसरी पाइन्छ ?’, ‘कसरी स्वास्थ्य भइन्छ ?’ भनेर खोज्न थालेका छौं ।
मनको विकार त्यागौं
वास्तवमा जीवनलाई सुन्दर बनाउनका लागि अरु केही गर्न पर्दैन, मनको विकार त्याग गरे पुग्छ । हाम्रो मनभित्र अनेक विकार जमेर रहेको हुन्छ । त्यही विकार हो, जसले हामीलाई हास्न दिदैन । त्यही विकार हो, जसले हामीलाई खुसी हुन दिदैन । त्यही विकार हो, जसले हामीलाई उमंग दिदैन ।
हामीभित्र जमेर रहेको विकार हो, दम्भ, प्रतिसोध, इर्ष्या, मोह, वासना, लोभ, आलस्य आदि ।
यी कुराहरु नै हाम्रो प्रगतिका वाधक हुन् । जब हामी प्रगतिको कुरा गर्छौं, कसैले बाधा गर्छन् कि भनेर शसंकित रहन्छौं । हामी आफ्ना घर परिवार, आफन्त, छिमेकी र समाजका व्यक्तिहरुसँग भयभित रहन्छौं । हामीलाई लाग्छ, कतै उनीहरुले मलाई बाधा गर्ने त होइनन् ?
तर, बाधा हामीभित्रकै विकार तत्व हुन् । जब विकार त्याग्छौं, दुनियामा हाम्रा कोही सत्रु नै हुँदैनन् । दुनियामा हाम्रा प्रतिस्पर्धी नै हुँदैनन् ।
जसरी हामीभित्र विकार तत्व छन्, त्यसैगरी गुणहरु पनि छन् । हामीभित्र नै छ, खुसी, हामीभित्रै छ, करुणा, हामीभित्रै छ जाँगर, हामीभित्रै छ प्रेम, हामीभित्रै छ सद्भाव, हामीभित्रै छ संवेदना । यी यस्ता मानविय तत्व हुन्, जसले हाम्रो जीवनलाई रसिलो बनाउँछ ।
खुसी कहाँ पाइन्छ ?
हामी खुसी खोज्न अनेक वाहाना गछौर्ं । सिनेमाघर धाउँछौं । डिस्कोथेक पुग्छौं । घरमा भोजभत्तेर राख्छौं । मदिरापान गर्छौं । गाडी खोज्छौं, सुन खोज्छौं, घरजग्गा खोज्छौं । तर, सुख बाहिर होइन, हामीभित्रै छ । हामी आफै सुखका स्रोत हौ । तर, यो स्रोतलाई अवरोध पुर्‍याउने विकार तत्वलाई हटाउनुपर्छ । जब मनबाट लोभ, इर्ष्या, दम्भ जस्ता वाधक तत्वलाई हटाइन्छ, सुख त्यसै प्राप्त हुन्छ । हरेक समस्याभित्र अवसर पनि
अक्सर हामी समस्याको कारण दुखी हुन्छौं । यस्तो लाग्छ, हामीलाई चारतर्फ समस्याले घेरा हालेका छन् । कतिले यसबाट उन्मुक्ती पाउनका लागि आत्महत्याको बाटो रोज्छन् । मानौ, समस्या यस्तो भूत हो, जसले हामीलाई लखेटिरहन्छ । तर, त्यही समस्याले अवसर पनि लिएर आएका हुन्छन् । हरेक समस्याभित्र समधान मात्र हुँदैन, अवसर पनि हुन्छ । त्यसैले जुन कुरालाई हामी समस्या देख्छौं, असल मान्छेहरुले त्यहीभित्र अवसर खोज्छन् ।
भनिन्छ, हरेक समस्याको एउटै हल हो श्रम । अर्थात श्रम नै हरेक समस्याहरुको समधान हो । जब हामी सार्थक श्रम गर्छौं, त्यसले कुनैपनि समस्यालाई नजिक पर्न दिदैन । त्यसैले श्रमबाट हामी कहिले पनि विमुख हुनुहुँदैन ।
हामीलाई रोगले दुख दिन्छ । अहिले हामी कुनै न कुनै किसिमको रोगबाट पीडित छौं । रोगकै कारण हामीले भनेजस्तो खान पाएका छैनौं, भनेजस्तो गर्न पाएका छैनौं । तर, यी रोग हामीलाई कसले दिएको हो ? कुनै सत्रुले ? कुनै पराइले ? कुनै आफन्तले ?
प्रकृतिमा कति धेरै खानेकुरा छन्, जसले हामीलाई निरोगी र तन्दुरुस्त जीवन बाँच्न सघाउँछ । तर, त्यसलाई पन्छाउँदै हामी स्वादको पछाडि लाग्छौं । शरीरले यस्ता खानेकुरा थेग्न सक्दैन । भित्री अंगहरुको कार्य संचालनमा अवरोध पुग्छ । हामी रोगी हुन्छौं ।
हामी रोगी हुनुमा जसरी हाम्रो हात छ, उसैगरी रोगमुक्त हुनका लागि पनि हाम्रै प्रयास अनिवार्य छ । यदी हामी स्वस्थ्य जीवनयापन गर्ने हो, पोषिलो र स्वस्थ्यवर्द्धक खानेकुरा खाने हो भने, सक्रिय जीवन विताउने हो भने, सन्तुलित दिनचर्या पालना गर्ने हो भने हामी कसरी रोगी हुन्छौ ? जीवन अनमोल धन हो । जीवनभन्दा ठूलो अर्को धन छैन भन्ने हामी जान्दछौं । तर, जीवनलाई धरापमा राखेर भौतिक सुखको मोहमा दौडदा दौडदै हामी दुखको तलाउमा फस्न पुग्छौं ।
युवकको प्यान्टको खल्तीमा रहेको OnePlus फोन विस्फोट भए पछि..!